बच्चाहरूलाई सहयोगी अभिभावक सम्मेलनको विकास गर्न - जेफरसन सेन्टर - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
बच्चाहरूलाई सहयोगी अभिभावक सम्मेलन फस्टाउन
केटाकेटीलाई अभिभावकको सम्मेलन गर्न सहयोग गर्नु एक नि: शुल्क वार्षिक कार्यक्रम हो जुन आमा-बुबा, हेरचाहकर्ता र अभिभावकहरूको लागि व्यावहारिक जानकारी प्रदान गर्दछ जुन सबै उमेरका बच्चाहरूलाई सकरात्मक तरीकाले बढ्न मद्दत गर्दछ। यो वर्ष, घटना पूर्ण भर्चुअल हुनेछ!
सेप्टेम्बर and र अक्टुबर १ देखि 30--from अपराह्न
हाम्रो वार्षिक मद्दत गर्ने बच्चाहरू फलिफोर गर्ने घटना यसको th० औं वार्षिकोत्सवको लागि फिर्ता भयो! यस वर्ष, नि: शुल्क, आमाबुवा, अभिभावक, र हेरचाहकर्ताहरूका लागि २-दिन सामुदायिक कार्यक्रम वस्तुतः आयोजित हुनेछ। रेजिष्ट्रेन्टहरूसँग कार्यक्रम पछि days० दिनको लागि हाम्रो प्रस्तुतकर्ताहरूबाट विशेष भिडियोहरू हेर्ने क्षमता हुन्छ।
दर्ता अब खुल्ला छ! आज साइन अप गरेर यस घटनालाई मिस गर्न मिल्दैनको लागि तपाईंको सीट बचत गर्नुहोस्!
यो घटना मनपर्‍यो? द्रुत फाराम भर्ना गर्न केहि समय लिई हामीलाई यी समुदाय वर्गहरू नि: शुल्क राख्न मद्दत गर्नुहोस् यहाँ.
मद्दत पुर्‍याउने बच्चाहरू फस्टाउने प्याकेट डाउनलोड गर्नुहोस् (अंग्रेजी)
डेस्कार्ग एल् प्याक्टे प्यारा बच्चाहरूलाई सफल हुन सहयोग गर्दै (Español)
नयाँ यो वर्ष!
हाम्रो th० औं वार्षिकोत्सव घटना हाम्रो नयाँ भर्चुअल कन्फरेन्स प्लेटफर्मलाई धन्यवाद पहिलेभन्दा ठूलो र राम्रो हुने छ!
विगतमा, अभिभावक, अभिभावक, र हेरचाहकर्ताले एक दर्जन भन्दा बढी कक्षाको सूचीबाट भाग लिनको लागि दुई सत्रहरू छनौट गर्नुपर्दथ्यो, बाल विकास र मनोविज्ञानको क्षेत्रमा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका थिए। यस बर्ष, तपाईंले यस अद्वितीय दुई-दिन घटनाको पाठ्यक्रममा हाम्रा १ of सत्र मध्ये एउटा एक हराएको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन!
सहभागीहरू दिनको दुई लाइभ,-०-मिनेट वर्गमा ट्युन गर्न सक्षम हुनेछन् र सबै रजिष्ट्रेन्टहरूको हुनेछ घटना पछि days० दिनको लागि सबै रेकर्ड गरिएका सत्रहरूमा पहुँच गर्नुहोस्!
रेजिष्टर गर्नुहोस् र यी लाभहरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्:
प्रत्यक्ष सत्र पछि एक-देखि-एक प्रस्तुतकर्ताहरूसँग च्याट गर्नुहोस्
हाम्रो भर्चुअल स्रोत मेलामा अतिरिक्त संसाधनहरू पहुँच गर्नुहोस्
घटना पछि days० दिनको लागि प्रत्येक सत्रको मांगमा रेकर्डि Watchहरू हेर्नुहोस्
यस बर्षको घटनाको लागि केहि प्रस्तुतीकरण शीर्षकहरू जाँच गर्नुहोस्!
बच्चा बच्चा (उमेर ०-२): नयाँ बन्धन निर्माण गर्दै - बच्चाहरूले पहिलो दुई बर्षमा ठूलो वृद्धि अनुभव गर्दछन्।2वर्ष पुरानो सम्झौता सीमितता र रिसको झोंकमा मद्दत पुर्‍याउन अभिभावकहरूले एउटा शिशुको पोषण गर्नबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तपाईंको बच्चाको जीवनको यस चरणमा शारीरिक र भावनात्मक विकास ढाँचाहरूको बारेमा बढी सिक्नुहोस्।
प्रारम्भिक वर्षहरू (उमेर 3--5): सफलताको लागि ब्लुप्रिन्ट सिर्जना गर्दै - एक बच्चाले के अनुभव गर्दछ र and र experiences बर्ष बीचको उमेरको बीचमा भविष्यको विकासको लागि आधार तयार गर्दछ। जवान बच्चाको शारीरिक र भावनात्मक विकास ढाँचा र बच्चाहरूलाई स्वस्थ हुर्कन मदत गर्न वयस्कको भूमिका बुझ्नुहोस्।
प्राथमिक वर्षहरू (उमेर ages-११): स्वस्थ विकास को लागी फाउंडेशन - यी बर्षहरूमा, बच्चाहरूले आफैंले समस्याहरू समाधान गर्न सिक्छन् र बिस्तारै उनीहरूको स्वतन्त्रता विकास गर्दछन्। आफ्नो बच्चाको संरचना र समर्थनको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्न सिक्नुहोस् जब उनीहरूलाई समस्या समाधान गर्न आवश्यक सीपहरू निर्माण गर्न र उनीहरू आफैले राम्रो छनौट गर्न मद्दत गर्दछ।
किशोर वर्ष (१२-१-12 वर्ष): फ्रेमिंग सीमा र अपेक्षाहरू - किशोरावस्थाका वर्षहरू सबैका लागि निराशाजनक समय हुनसक्दछ। एक वयस्क को रूप मा, तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, तर कसरी थाहा छैन। तपाइँको किशोर किशोरीको पहिचानको खोजीको लागि सम्मान र उचित नियम र सीमा सेटिंगको साथ स्वतन्त्रताको लागि बढेको आवश्यकता दुबै प्रबन्ध गर्न नयाँ तरिकाहरू फेला पार्नुहोस्।
सफल बच्चाहरूलाई सशक्त पार्दै: आत्मविश्वास बढाउँदै, युवा जनहरूको हेरचाह गर्दै - अभिभावकको हैसियतमा हामी आफ्ना बच्चाहरू के गर्न वा के चाहँदैनौं भनेर सोच्न धेरै समय खर्च गर्दछौं। यो अझ महत्त्वपूर्ण छ, यद्यपि हामीले चाहेको कुराको स्पष्ट धारणा राख्नु। एक शक्ति आधारित फ्रेमवर्क को उपयोग गरेर, हामी स्वस्थ बच्चाहरु हुर्काउन सहयोग गर्न को लागी काम गर्न सक्दछौं।
अभिभावकहरूको लागि तनाव बस्नेहरू: पहिले तपाईंको ऑक्सीजन मास्क राख्नुहोस् - कुनै पनि उमेर को बच्चाहरु को पालन पोषण तनावपूर्ण हुन सक्छ। प्यारेन्टिंग, रोजगार, सम्बन्ध, र वित्तको तनावको साथ, तपाईंको शारीरिक र भावनात्मक सुस्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। हामी प्रायः हाम्रा आफ्नै भावनात्मक आवश्यकताहरूलाई अन्तिममा सोच्दछौं। जब तपाइँको जीवन मा तनाव भारी महसुस, यो एक विश्राम लिन र एक सास लिने समय हो। स्टक लिन र तपाईंको जीवनमा के तपाईं नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ पहिचान गर्न सिक्नुहोस्। उपकरणहरू पुन: केन्द्रित गर्न, कार्य लिनुहोस्, र स्वस्थ, उत्पादक रूपमा अगाडि बढ्न सिक्नुहोस्।
किशोर दिमाग: उनीहरू के सोचिरहेका छन्? - के तपाईं आफूलाई आफैंले निरन्तर आफ्नो किशोरीलाई सोधिरहनुभएको पाउनुहुन्छ, "तपाईं के सोचिरहनुभएको थियो?" सँगै हामी मस्तिष्क विकास र युवा व्यक्तिको व्यवहारको अन्वेषण गरेर रहस्यलाई सुल्झाउने छौं, र कसरी हामी सकारात्मक अनुभवहरू मार्फत 'नयाँ मार्गहरू' लाई प्रभाव पार्न सक्छौं। हामी सजिलैसँग बुझ्ने सर्तहरूको साथ वैज्ञानिक खोजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं र हाम्रो युवा व्यक्तिहरूसँग राम्रोसँग बुझ्न र जडान गर्न नयाँ तरिकाहरू सिक्नेछौं।
ट्रामा पछि प्यारेन्टि। - बाल्यकालमा आघात धेरै प्रकारका लिन सक्दछ: उपेक्षा, बिभाजन, साक्षी वा हिंसाको अनुभव, प्राकृतिक प्रकोप, वा दुर्घटनाहरू। आघात अनुभव गरेका बच्चाहरूले प्रायः आचरण प्रदर्शन गर्छन् जुन अनाज्ञाकारिता वा अनादरको रूपमा गल्ती गरिन्छ र थप समझ, हेरचाह र समर्थनको साथ फरक दृष्टिकोण चाहिन सक्छ। चाहे तपाईं जन्म अभिभावक, धर्मपुत्र वा आफन्त हो, विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्न र सुरक्षा, स्थिरता, र प्रेमको घर बनाउन मद्दतको लागि प्रारम्भिक आघातको बारेमा के भन्ने जान्नुहोस्।
रचनात्मक सह-अभिभावकीय - सह-प्यारेन्टिंगले तपाईंको बच्चाहरूलाई स्थिरता र दुबै आमा बुबा दुवैको साथ सम्बन्ध दिन सक्छ - तर यो विरलै सजिलो छ। सह-अभिभावकलाई क्रममा तपाईंको आफ्नै सम्बन्ध मुद्दाहरू छुट्याउँदा तनावपूर्ण हुन सक्छ। यस वर्गमा हामी तपाईंको सञ्चार, तपाईंको तनाव व्यवस्थापन, द्वन्द्वको सामना गर्ने, समस्याहरू समाधान गर्ने, तपाईंको बच्चाहरूलाई घरहरू बीचको संक्रमणमा मद्दत गर्ने, र अन्य धेरै कुरा गर्नेछौं।
डिजिटल विश्वमा अभिभावक - विज्ञहरू अनुमान गर्छन् कि हामी प्रत्येक दिन ,7,000,००० भन्दा बढी मिडिया सन्देशहरू देख्छौं र सुन्छौं। तपाइँ कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाइँको बच्चालाई के प्रभाव गरिरहेको छ? बच्चाहरूले प्रयोग गर्ने अनुप्रयोगहरू र पाठहरूले उनीहरूलाई एक अर्कामा निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ वा बदमाश र लज्जित पार्न सक्छ। उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको मिडियाको बारेमा जान्नुहोस्, कसरी तपाईं उनीहरूको प्रयोगलाई मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई समर्थन प्रदान गर्नुहुन्छ।
तपाइँको बच्चालाई उनीहरूको चिन्ताजनक मनलाई वशमा पार्दै - के तपाइँको पूर्व-किशोर / किशोर किशोरीहरु तनाव र चिन्ता संग संघर्ष गर्दछ? आउनुहोस् केहि तरिकाहरू सिक्नुहोस् तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको चिन्तित दिमागलाई वशमा पार्न। हामी विचारशीलता र आराम सहित प्रभावी मुद्दाहरू कौशल छलफल र अभ्यास गर्नेछौं र तपाईं आफ्नो बच्चालाई यी सीपहरू कसरी सिकाउने सिक्नुहुनेछ। यो कक्षा १२-१-12 वर्ष उमेरका बच्चाहरूको आमा बुबा र हेरचाहकर्ताहरूको लागि हो।
राम्रो पोषण - हाम्रा बच्चाहरूको दिमागले कसरी काम गर्ने र उनीहरूको ध्यान केन्द्रित गर्ने, सम्झने र सिक्ने क्षमताको, उनीहरूले खाने कुराले खासै असर गर्न सक्छ। यो वर्गले जानकारी, विचारहरू, र व्यस्त अभिभावकहरूको लागि कसरी पोषण को माध्यम बाट बच्चाहरूको सिकाई र सment्लग्नता बढाउनमा सुझावहरू प्रदान गर्दछ। तपाईं हाम्रो खाना प्रणालीको बारेमा सिक्नुहुनेछ, कसरी सिक्ने र मुडलाई समर्थन गर्ने सरल परिवर्तनहरू, साथै घरमा बनाउने सजिलो व्यंजनहरू सहित।
कसरी तपाइँको बच्चाहरु लाई सुरक्षित महसुस गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जब तिनीहरूको विश्व नियन्त्रण बाट बाहिर जान्छ - कुनै पनि प्रकारको सामूहिक दु: ख पछि, आमाबाबु र हेरचाहकर्ताहरू प्राय: के भन्ने र के आफ्ना बच्चाहरूसँग साझेदारी गर्ने भनेर संघर्ष गर्दछन्। हामी कसरी बच्चाहरूलाई सुरक्षित र सुरक्षित राख्दछौं जुन संसारमा सुरक्षित र सुरक्षित महसुस गर्दैन? यस वर्गले कसरी बच्चाहरूलाई सामना गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, कुन विकृति आघात हुन्छ र कसरी स्पट हुन्छ, कसरी खुला र उचितसँग कुराकानी गर्ने, र उपलब्ध स्रोतहरू सबै उमेरका बच्चाहरूसँग यी परिस्थितिहरूलाई सम्बोधन गर्न।
LGBTQ युवाहरूको ख्याल राख्दै - LGBTQ को रूपमा पहिचान गर्ने बच्चाहरू वा जो लि gender्ग गैर अनुरूप छन् उनीहरूलाई उनीहरूको अभिभावक र अन्य हेरचाह गर्ने वयस्कहरूको समान शर्त प्रेम र समर्थन चाहिन्छ जसरी सबै बच्चाहरूले गर्दछन्। यस वर्गले आमाबुवालाई अपरिचित इलाकामा नेभिगेट गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र हाम्रो LGBTQ र लैंगिक गैर-अनुरूप युवाहरूको लागि कसरी समर्थन र वकालत गर्ने भन्ने बारे जानकारी र संसाधनहरू प्रदान गर्दछ।
प्रश्नहरू? 303-432-5320 | मौसम रेखा 303०432-5264-XNUMX-XNUMX।